Farriin ku socota Wasiirka Waxbarashada iyo xukuumadda Somaliland. | Awdalpress.com
Farriin ku socota Wasiirka Waxbarashada iyo xukuumadda Somaliland.
Waxa Daabacay staff-reporter on May 7th, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Waxan ognahay in beesha caalamka iyo adduunka aqoonta u hiilliyaa, ay jecel yihiin in goobaha waxbarashada ee bulsho la tayeeyo balse aan la xidhin, in ardayda loo sameeyo Manhaj koriya maskaxdooda, qiyamkooda ama akhlaaqdooda, aqoontooda iyo horumarkooda. Laakiin ma taageeraan wasaarad Waxbarasho amma maamul dawladeed oo shacabka kala dagaallamaya dhinaca aqoonta, maskaxda iyo horumarka. Xaaji, Mas’uuliyadda laguu igmaday ee Wasiirka Waxbarashada Somaliland iyo xukuumadda kuu igmatayna waxa uu falalka aad samaynaysaa muujinayaa mid ka hor imanaya rabitaanka iyo ujeeddooyinka aasaasiga ah ee waxbarasho ama falsafadda waxbarasho ee ay dunida deeqaha bixiyaa ay ku taageeraan Somaliland. Si loo soo saaro bulsho amma da’yar caafimaad qabta, aqoon leh, ka leexata dariiqyada qaldan, sida argagixisada iyo waxa la midka ah.
Aniga oo ixtiraam iyo qaddarin siinaya dhammaanba bahda waxbarashada Somaliland iyo xukuumaddaba, waxan maanta jeclaystay in aan farriin gaar ah u diro Wasiirka Waxbarashada Somaliland iyo xukuumadda u igmatay mas’uuliyaddaasi oo ah mid miisaankeeda leh.
Sida aad hoos ka dhegeysan doontaan waxa uu Wasiir Abdillaahi Habane in dhawaala ahba ku kacayey ficillo iyo dhawaqyo ay dad badani u arkaan kuwo qalad ah. Waxana ugu danbeysey hadal hanjabaad ah oo uu jeediyey Jaamacadda Cammuud, isaga oo leh, ‘tallaabo ayaan ka qaadi doonnaa Amoud University’. Isaga oo u aanaynaya hawlaha qaldan ee Komishanka doorashooyinku ka wadaan Awdal ama sida Kaadh qaadashadu uga socota gobollada galbeedka Somaliland.
Anigu ma diidin in Wasiir Habane uu dhalliillo hawshaa Kaadh qaadashada, mana diidin in uu shakhsiyaadka maamulaya dhalliilo, laakiin waxa aan meesha ku jirin in uu Jaamacadda si toos ah u weeraro, waayo, jaamacaddu waa INSTITUTION, loolamana macaamili karo sida qof. Waxana u habboonayd in uu si sharci ah ula xisaabtamo hebel iyo hebel in ay danbi galeen. Qof uu eedeeyeyna ma jirto. Horena waxa uu albaabada ugu ooday Jaamacado ku yaalla Burco iyo dugsiyo dhawr ah oo ku kala yaalla Borama. Sidaasi daraaddeed, Abdillaahi Habane waxa looga fadhiyaa in uu dib isugu noqdo, akhriyo dastuurku hawsha uu u igmaday, waxa uu saxay iyo waxa uu qalday.
Bal hadda aan Abdillaahi wada dhegeysanno…..
Arrintaa uu Abdillaahi Dheere ku kacay maxay mas’uuliyiinta Jaamacadda Amoud ka yidhaahdeen:
Doorashadu way dhici doontaa labada xisbi ee Abdirahm Cirro iyo Muse Biixi u kala sharraxan yihiinna mid uun baa soo bixi doona. Labada mas’uulna uma ega kuwo ku faraxsan sida uu Abdillahi Dheere yeelayo amma ficillada uu ka wado Somaliland. Dhinaca kale waxan xukuumadda Somaliland looga fadhiyaa, in Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxweyne Xisgeen Zaylici ay Abdillaahi Dheere soo hor fadhiisiyaan golaha wasiirrada, ee ay usbuuciiba mar la kulmaan. Si uu uga jawaabo su’aalaha ay dadku ka qabaan falalka Abdillaahi Dheere uu dhawaanahan ku kacay, ee aadka looga qaylyayo.
Abdillaahi ma waxad doonaysaa, in da’yarta reer Somaliland ka leexato waxbarashada, oo ay suuqa ku soo bataan, in ay dariiqyada qaldan ee xag-jirnimo u leexdaan. Maxaad ugala dagaallamaysaa fursada waxbarasho, ee ay u tagaan dugsiyada jajaban, ee aanay weliba oollin adeeg waxbarasho oo ku filan? Miyaanay habboonayn in aad joojiso, xaalad abuurka iyo ficillada taban ee aad baryahan ka waddo Somaliland gaar ahaan Awdal.
Haddii tallaabadaa Abdillaahi Habane ay xukuumadda Somaliland ka danbayso waa mid abuuraysa in da’yarta waxbarashada u baahani u leexdaan dariiqyadaa qaldan ee aan soo sheegnay, kuwaasi oo jihadoodu tahay aqoon la’aanta iyo mashaqooyinka ka dhalan kara. Xilka xukuummada ka saaran Waxbarashaduna waa in ay ugu horrayn dhiirri geliso, in geed kasta hoostiisa wax lagu barto, dugsiyada dhisanna aanay taageerin in la xidho, balse la tayeeyo. Shacabka iyo da’yartana ugu baaqaan in ay waxbartaan.
Abdillaahi abti, walaal, waxan filayaa in aad ujeedkayga fahamtay oo aad si fiican u akhriday qoraalkayga aan adiga tooska kuugu soo diray, waxan kaa filayaa in aad ka leexan doonto tallaabooyinka aan fiicnayn ee aad dhawaanahan ku caan baxday. Taariikhduna way is qoraysaa, taadana adiga ayaa qalinka u haysta ee ku dadaal in aanad meel xun is dhigin.
Ugu danbayn ogow reer Somaliland waa isku wada qabiil, waa wada laan dheere oo nabad iyo sharaf ku wada nool. Way jiri karaan shakhsiyaad qaldan, oo qabiil hoose ka raadsada dantooda, laakiin dadnimada asalka ah ee gobonnimada lihi, waa midda caqliga saliimka ahi fahmi karo, ee aan ku salaysnayn qabiil iyo dad necbaysi. Bahda Waxbarashada ee aad hoggaankeeda tahayna waa kuwo kuu wada baahan, oo u baahan hoggaan caadil ah. Aqoonta aan kuu leehayna ma tihid nin aan doqonniimo iyo xumaan ku aqaan, ee ha is xumaynin.
This post has been viewed 3971 times.